Mbadamba ụrọ maka ụlọ akwụkwọ: nke ịhọrọ 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Iri afọ ole na ole gara aga iji mụọ ihe zuru ezu iji gosi akwụkwọ niile ụlọ akwụkwọ ahụ onye nkuzi; Taa, n'aka nke ọzọ, ndị na-eto eto na ndị na-eto eto nke na-aga ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ga-enwerịrị opekata mpe otu mbadamba, nke na-abaghị uru maka ịdekọ, maka ịme nyocha na Weebụ na ime ka ụfọdụ isi ihe ọmụmụ mụọ ọnụ. na onye nkuzi kamakwa ịhazi ihe mmụta dị anya ma ọ bụ soro ndị ọrụ ibe gị nwee ọmụmụ ihe site na mkparịta ụka vidiyo (nke dị mkpa karị karịa na mmachi na mmachi nke ndị ọrụ ahụike nyere.
Naanị n'ihi otu mbadamba ihe di nkpa na uzo omumu akwukwo nke umu akwukwo, na ntuziaka a ka anyị ga-egosi gị mbadamba nkume kacha mma maka ụlọ akwụkwọ na ị nwere ike ịzụta n'ịntanetị, yabụ ị nwere ike ịhọrọ ụdị dị ọsọ ọsọ, agile, na dakọtara na ngwa ndị bara uru maka agụmakwụkwọ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ zụta mbadamba nkume ọhụrụ maka ụlọ akwụkwọ na ụlọ ahịa nkịtị ma ọ bụ na ụlọ ahịa ọ na-abụ ihe amamihe dị na ya ileba anya na njirimara teknụzụ ndị a tụrụ aro, iji zere ịzụta mbadamba ngwa ngwa, nke anaghị agbasawanye nke nkwekọ na-enweghị atụ.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Mbadamba ụrọ gam akporo kacha mma: Samsung, Huawei ma ọ bụ Lenovo?
Mbadamba ụlọ akwụkwọ kacha mma
Enwere ọtụtụ mbadamba nkume kwesịrị ekwesị maka ụlọ akwụkwọ, mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole kwesịrị ịtụle maka izi ihe. Teachersfọdụ ndị nkuzi na ndị prọfesọ ga-eweta usoro a kapịrị ọnụ maka klaasị niile, yabụ na-ajụkarị tupu ịzụrụ ihe nwere ike ghara ịbụ eziokwu.
Tupu ịzụrụ mbadamba ọ bụla iji rara ụlọ akwụkwọ, anyị na-adụ gị ọdụ ka ịlele njirimara ndị a:
Nhazi: iji nwee ike ịmalite ngwa niile nke ụlọ akwụkwọ anyị ga-elekwasị anya na ụdị na 2 GHz quad-core processor ma ọ bụ mmelite kachasị njọ (nsụgharị na Octa-core CPU).
RAM: iji mee sistemụ arụmọrụ na ngwa agụmakwụkwọ, 2GB nke RAM ezuola, mana iji mepee ọbụna ngwa 2 ma ọ bụ 3 dị arọ na-enweghị nsogbu ọ ga-adị mma ilekwasị anya na ụdị nwere 4GB RAM.
Nchekwa ebe obibi- Mbadamba akwụkwọ ga-ejupụta ederede ebudatara, broshuọ, na faịlụ PDF ngwa ngwa, yabụ ọ kachasị mma ịnwe ma ọ dịkarịa ala 32GB nke ebe nchekwa ozugbo, ọbụlagodi ka mma ma ọ bụrụ na enwere ike ịgbasa (opekata mpe na ụdị gam akporo). Iji zere nsogbu oghere, anyị na-akwado iwekota ọrụ igwe ojii ebe ịchekwaa faịlụ ndị kachasị ukwuu.
Ihuenyo: Ihuenyo ga-abụ na ọ dịkarịa ala sentimita asatọ ma kwado mkpebi HD (karịa 8 ahịrị kwụ). Imirikiti ụdị ga-enye nyocha na teknụzụ IPS, mana anyị nwekwara ike ịchọta Retina (na Apple).
Njikọ- Iji-enwe ike jikọọ ọ bụla Wi-Fi na netwọk ị chọrọ a sọrọ-gbalaga wireless modul, n'ihi ya, ị nwekwara ike irite uru na ngwa ngwa 5 GHz njikọ. Ọnụnọ nke Bluetooth LE dịkwa mkpa, iji nwee ike ijikọ ụdị ọ bụla nke ekweisi ikuku. Dị ndị nwere SIM na nkwado netwọkụ mkpanaka (LTE ma ọ bụ mgbe e mesịrị) dị oke ọnụ ma maka agụmakwụkwọ bụ kpam kpam ọrụ.
Ndị kamera: Maka nnọkọ vidiyo ọ dị mkpa na enwere igwefoto n'ihu, ka ị nwee ike iji Skype ma ọ bụ Mbugharị na-enweghị nsogbu. Ọnụnọ nke igwefoto azụ bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị, ebe ọ bụ na mgbakwunye na foto ọ ga-ekwe i scanomi akwukwo akwukwo iji gbanwee ha dijital.
Onwe yaMbadamba nwere batrị buru ibu karịa smartphones ma kwe ka, n'okpuru ọnọdụ eji eme ihe, iji ruo 6-7 awa iji.
Sistemụ nrụọrụ: ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mbadamba nkume niile anyị ga-egosi na ị nwere Android dị ka sistemụ arụmọrụ ma anyị agaghị elelịbiga ihe ókè iPads na iPadOS, a ngwa ngwa, ngwa ngwa na mgbe dị mkpa usoro (ụfọdụ ndị nkuzi ga-arịọ kpọmkwem ka iPads dị ka ngwá ọrụ izi ihe).
Dị maka ire ere ịhọrọ
Mgbe ị hụchara ụfọdụ njirimara nke ezigbo mbadamba maka ụlọ akwụkwọ kwesịrị inwe, ka anyị hụ ụdị nke ị nwere ike ịzụta, bido na nke kachasị dị ala karịa elu. Modelkpụrụ mbụ anyị nyere gị ndụmọdụ ka ị tụlee dị ka mbadamba maka ụlọ akwụkwọ bụ nke ọhụrụ Ọkụ HD 8, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 150 (yana onyinye pụrụ iche na-arụ ọrụ).
Na mbadamba ọnụ ala a, anyị na-ahụ 8-inch IPS HD ihuenyo, quad-core processor, 2GB nke RAM, 64GB nke nchekwa dị n'ime ebe nchekwa, ntinye USB-C maka ịkwanye, igwefoto n'ihu, igwefoto azụ, nnwere onwe ruo awa 12 na Onye nwe ya sistemụ arụmọrụ na gam akporo (na-enweghị Play Store mana yana Amazon App Store).
Ọ bụrụ na anyị chọrọ Storelọ Ahịa Play na mbadamba ụlọ akwụkwọ ma mee ka ọ dị mfe ịchọta ngwa nyocha, anyị nwere ike ilekwasị anya na mbadamba ihe Samsung Galaxy Tab A7, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 250.
Na Samsung mbadamba anyị na-ahụ 10,4-anụ ọhịa ihuenyo na 2000 x 1200 Pixel mkpebi, octa-isi processor, 3 GB nke Ram, 32 GB nke expandable n'ime ebe nchekwa, sọrọ-gbalaga Wi-Fi, akpaka hotspot, n'ihu igwefoto, igwefoto azụ, 7040 mAh batrị na gam akporo 10 sistemụ arụmọrụ.
Mbadamba ọzọ kwesịrị ekwesị maka iji ụlọ akwụkwọ eme ihe bụ Lenovo Tab M10 HD, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 200.
Na mbadamba nkume a, anyị nwere ike ịchọta 10,3-anụ ọhịa Full HD ihuenyo, MediaTek processor, 4GB nke Ram, 64GB nke ebe nchekwa dị n'ime, WiFi + Bluetooth 5.0, n'ọdụ ụgbọ mmiri na raara onwe ya nye okwu ọdịyo, integrated Alexa olu nnyemaaka na 10-hour batrị ogologo oge
Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, anyị chọrọ mbadamba nkume kacha ere ahịa n'ahịa ọ bụla (ma ọ bụ ndị nkuzi na-ewetara anyị ngwaahịa Apple), anyị nwere ike ịtụleApple iPad, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 400.
Dị ka ngwaahịa niile nke Apple, a na-elebara ya anya ruo ntakịrị ntakịrị ma nwee ngosipụta 10,2-inch Retina, A12 processor na Neural Engine, nkwado maka Apple Pencil na Smart Keyboard, igwefoto azụ azụ nke 8 MP, Wi-Fi nke sọrọ gbalaga, Bluetooth 5.0 LE, 1.2MP N'ihu FaceTime HD igwefoto vidiyo, stereo okwu na iPadOS sistemụ.
Ọ bụrụ n’anyị ejighi afọ ojuju na iPad dị mfe ma chọọ obere PC enwere ike ịme ihe niile, naanị ụdị anyị ga - elekwasị anya bụApple iPad Pro, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 900.
Mbadamba ihe a gosipụtara ihe ngosi 11 "ihu na ihu Liquid Retina na teknụzụ ProMotion, A12Z Bionic processor with Neural Engine, 12MP igwefoto dị obosara, 10MP ultra wide wide, nyocha LiDAR, 7MP TrueDepth n'ihu igwefoto, ID ID , odiyo okwu ano, ohuru 802.11ax Wi-Fi 6 sistemụ nrụọrụ na iPadOS.
Mbadamba mbadamba ndị anyị kwadoro n'elu zuru oke maka usoro ọmụmụ ọ bụla, site na ụlọ akwụkwọ elementrị ruo na mahadum. Ọbụna ụdị ndị dị ọnụ ala na-eme akụkụ ha nke ọma, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe amamihe dị na ya ilekwasị anya na iPad (mgbe ọnọdụ akụ na ụba na-enye ya ohere) maka ịdị mfe ya, ọsọ ọsọ nke ngwa ya yana ndakọrịta na ngwa agụmakwụkwọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ mbadamba nkume nwere mgbidi, anyị na-atụ aro ka ị gụọ ntuziaka anyị Mbadamba ụrọ 2-in-1 kacha mma na keyboard mi Best Windows 10 Laptọọpụ Convertible Iji Mbadamba. Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, anyị anaghị ajụ ike na nkasi obi nke ide ihe ederede akwụkwọ ọdịnala na-enye, anyị nwere ike ịga n'ihu na-agụ na ntuziaka Akwụkwọ kacha mma maka ụmụ akwụkwọ.
Etu esi egwu PS5 egwuregwu n’enweghị njikwa
Ngwa 7 dị mkpa maka ịrụ ọrụ smart
Ọtụtụ ụzọ eji Mac Mini dị ka PC, TV Box na NAS
Kedu ka PS5 dị? nyocha na ntuziaka nke Playstation ọhụrụ
Huawei vs Xiaomi: onye na - eme igwe kacha mma?
PC kachasị mma nke na-ewe obere ohere
Otu esi choputa komputa gi maka ulo akwukwo ma obu ulo akwukwo
Glas nwere ọdịyo Bluetooth, maka ugogbe anya maka anwụ ma ọ bụghị
PC desktọọpụ kacha mma ịzụta si na igbe
Chaja laptọọpụ anaghị arụ ọrụ: otu esi edozi ya?
Ndị na-ekwu okwu na ndị na-ekwu okwu ka mma yana onye enyemaka Google